Ungawahlela kanjani amafayela e-PDF ku-Mac | ngivela ku-mac
Ungawahlela kanjani amafayela e-PDF ku-Mac
Ifomethi ye-PDF, evela ku-Adobe, isiphenduke indinganiso kukhompyutha futhi isiyiyona ndlela eyinhloko, futhi singasho ukuthi, ifomethi kuphela yabelana nganoma yiluphi uhlobo lwedokhumenti nge-inthanethi. Njengoba kuyifomethi evamile, njengefomethi ye-.zip yokucindezela amafayela, ukuvula amafayela ngale fomethi akudingi uhlelo lokusebenza ukuthi lufakwe.
Nokho, izinto ziba nzima uma sifuna hlela okuqukethwe kwakho, njengoba ngokungafani nefomethi ye-.docx ye-Microsoft Word, ayihloselwe ukuhlelwa, kodwa ukwabelana kuphela. Ngenhlanhla, kunezinhlelo zokusebenza ezisivumela ukuthi sihlele okuqukethwe kwamafayela e-PDF ku-Mac.
Okulandelayo, sikubonisa izinhlelo zokusebenza ezihamba phambili ze hlela i-PDF ku-Mac, izinhlelo zokusebenza esizozihlanganisa zibe izigaba ezimbili: ezimahhala nezikhokhelwayo. Njengoba izixazululo zamahhala zihlala zifunwa kakhulu, ikakhulukazi abasebenzisi abanezidingo ezithile, sizoqala ngazo.
1 Abahleli be-PDF bamahhala be-Mac
1.1 Ukubuka kuqala
1.3 I-PDF yobungcweti
2 Abahleli be-PDF abakhokhelwe ku-Mac
2.1 Isazi se-PDF
2.2 I-Adobe Acrobat
2.3 I-PDFElement - Isihleli se-PDF ne-OCR
3 Abahleli be-PDF abaku-inthanethi
Abahleli be-PDF bamahhala be-Mac
Kulungile, uhlelo lokusebenza lokubuka kuqala lwe-macOS hhayi umhleli wefayela le-PDF, kodwa kuyinketho enhle kakhulu ongayicabangela uma ukuphela kwento esiyifunayo ukwengeza amanothi ombhalo kumafayela anefomethi ye-PDF.
Uma izidingo zakho zingabandakanyi ukulungisa idokhumenti ephelele ngale fomethi, kodwa kunalokho ufuna nje ukwengeza okunye Ukuthi okunye ukulungiswa, akudingekile ukuphendukela kwezinye izinhlelo zokusebenza, ikakhulukazi, uma kuyicala eliqondile futhi akuvamile osukwini lwakho nosuku.
Isethi yamathuluzi amahhala i-LibreOffice eyenza itholakale kithi futhi esingakha ngawo noma yiluphi uhlobo lombhalo, kuhlanganisa uhlelo lokusebenza lwe-Draw, a Umhleli wesithombe uyahambisana nefomethi ye-Adobe.
Ngalolu hlelo lokusebenza, singakwazi hlela amafayela e-PDF ukulungisa okuqukethwe kwayo futhi kamuva ukuthekelisa kabusha kufomethi efanayo ukuze kulondolozwe ukuguqulwa.
para landa i-LibreOfficeDraw, kufanele silande lonke isethi yezinhlelo zokusebenza ngokusebenzisa ifayela le ngokulandelayo isixhumanisi
I-PDF Professional Suite uhlelo lokusebenza olungasivumeli kuphela hlela amafayela e-PDF, kodwa futhi isivumela ukuthi siyidale kunoma iyiphi ifomethi.
Lolu hlelo lokusebenza lunikeza uhla oluphelele lwemisebenzi chaza, buka, gcwalisa amafomu, sayina, hlela, maka, uhlaka, hlanganisa, hlukanisa, cindezela… Ngaphezu kwalokho, kusivumela futhi ukuthi siguqule amafayela e-PDF abe amafayela e-Word/HTML/TXT/PNG/JPG.
Uhlelo lokusebenza lwe-Professional PDF luyatholakala kuwe landa ngokuphelele ku-Mac App Store ngesixhumanisi esilandelayo.
I-PDF Professional-Annotate, SayinaMahhala
Nakuba i-Inkscape iyithuluzi lokudweba, singayisebenzisa futhi njenge Isihleli sefayela le-PDF, inqobo nje uma, lapho sivula idokhumenti, sihlola inketho Ngenisa umbhalo njengombhalo ohlelweni lokuguqula. Uma sesiyihlelile idokhumenti, singaphinde siyikhiphele kufomethi ye-PDF.
Uma idokhumenti ye-PDF kufanele uyihlele, faka noma yisiphi isithombe ofuna ukusikhohlisa, uhlelo lokusebenza oludingayo, uma ungasebenzisi umhleli wesithombe njalo noma ufuna ukuchitha isikhathi esincane ngangokunokwenzeka, i-Inkscape.
Ungakwazi landa i-inkscape mahhala ngokuphelele ku-mac ngokusebenzisa lesi sixhumanisi. Lolu hlelo lokusebenza luyatholakala, futhi mahhala ngokuphelele, lwe IWindows neLinux.
I-Skim iyisicelo samahhala esinjalo inweba amandla ohlelo lokusebenza lokubuka kuqala lwe-macOS. Lolu hlelo lokusebenza lwaklanywa njengethuluzi lokubuka kanye nokuchasisa izindatshana zesayensi (ezaziwa ngokuthi amaphepha). Uhlelo lungasetshenziswa ukubuka noma yiliphi ifayela le-PDF.
Okubi kakhulu ngalolu hlelo lokusebenza isikhombimsebenzisi salo, isixhumi esibonakalayo esithatha isikhathi ngempela ukujwayela ukwazi ukusebenza ngokunethezeka ngaso usuku nosuku.
Nge-Skim, singabuka amafayela e-PDF isikrini esigcwele, engeza futhi uhlele amanothi kudokhumenti, thekelisa amanothi njengombhalo, uhambisana ne-Spotlight, usivumela ukuthi sigqamise umbhalo obaluleke kakhulu, kufaka phakathi amathuluzi wokunqampuna ahlakaniphile...
I-Podemos landa i-Skim mahhala ngalokhu isixhumanisi.
Abahleli be-PDF abakhokhelwe ku-Mac
Enye yezinhlelo zokusebenza ephelele ngokuphelele Itholakala ku-Mac App Store i-PDF Expert, uhlelo lokusebenza oluvela kubathuthukisi abafanayo neklayenti le-Spark mail. Ngalolu hlelo lokusebenza, singahlela noma yiluphi uhlobo lwedokhumenti futhi silwenze, sengeze izivikelo, izitifiketi...
PDF Uchwepheshe: Hlela PDF Kuthengiswa ngama-euro angu-79,99 ku-Mac App Store.
Isazi se-PDF: hlela i-PDF79,99 €
Njengoba u-Adobe ungumqambi wefomethi ye-PDF, esinye sezinhlelo zokusebenza ezinhle kakhulu zokusebenza ngalolu hlobo lwefayela i-Adobe Acrobat. Ngalolu hlelo lokusebenza, asikwazi ukuhlela amafayela ngefomethi ye-PDF kuphela, kodwa futhi singakwazi zakha, engeza izinkambu zokugcwalisa amadokhumenti asevele enziwe, vikela amadokhumenti ngephasiwedi, faka nesitifiketi...
Ukuze usebenzise i-Adobe Acrobat Ukubhalisa kwe-Adobe Creative Cloud kuyadingeka, ngakho-ke ngaphandle uma usebenzisa lolu hlelo lokusebenza njalo, akufanelekile ukukhokha ukubhalisa kwanyanga zonke.
I-PDFElement - Isihleli se-PDF ne-OCR
I-PDFElement ingolunye uhlelo lokusebenza oluthokozisayo okufanele lucatshangelwe, inqobo nje uma uvamise ukusebenza ngamafayela akule fomethi, ngoba iyadingeka. khokha ukubhalisa kwanyanga zonke, kwekota noma konyaka. Okuwukuphela kwenzuzo uma kuqhathaniswa naleyo enikezwa yi-Adobe Acrobat ukuthi ishibhile.
Nge-PDFElement singakwazi hlela amafayela e-PDF, engeza amamaki nezichasiselo zazo zonke izinhlobo, dala amafayela e-PDF kwamanye amafomethi wefayela, dala futhi ugcwalise amafomu azo zonke izinhlobo, sayina i-PDF, imibhalo yeqembu...
I-PDFelement-PDF Isihleli ne-OCRMahhala
Abahleli be-PDF abaku-inthanethi
Nakuba akuyona indlela ekhululekile futhi ayimemi ukugcina ubumfihlo, esinye isixazululo esithokozisayo lapho uhlela amafayela e-PDF sitholakala kuwebhu I-Smallpdf.
I-Smalpdf iyinhlangano umhleli we-PDF osuselwe kuwebhu esivumela ukuthi sihlele amafayela ngale fomethi. Inikeza isivivinyo samahhala futhi inguqulo ye-Pro idinga ukubhaliswa kwanyanga zonke futhi inesandiso sesiphequluli.
Enye inketho eku-inthanethi etholakalayo yokuhlela amafayela itholakala kokuthi I-PDFescape, isixazululo samahhala ngokuphelele esingakwenziikuvumela ukuthi uhlele amafayela afika ku-10 MB noma amakhasi ayi-100. Iyatholakala futhi ngesandiso se-Chrome, Firefox, Edge...
Ngenxa yale webhusayithi, singakwazi hlela, dala futhi ubuke amadokhumenti ngefomethi ye-PDF, engeza izichasiselo, gcwalisa amafomu futhi ufinyelele imibhalo evikelwe ngamaphasiwedi, inqobo nje uma sikwazi.
Indlela ephelele ye-athikili: Ngivela kwa-mac » Apple » Izifundiswa » Ungawahlela kanjani amafayela e-PDF ku-Mac
"Isiphazamisi" ku-Safari sivumela ulwazi olusuka ku-akhawunti yakho ye-Google ukuthi luputshuzwe